‘मधेसका ठेकेदारहरु सत्तामा, मधेसी जनता जहाँकोत्यहीँ’ – वीरेन्द्र केएम – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
९ कार्तिक २०७७, आईतवार ०४:२४ English
‘मधेसका ठेकेदारहरु सत्तामा, मधेसी जनता जहाँकोत्यहीँ’ – वीरेन्द्र केएम
तीनओटा मधेशी दलबाट यतिबेला कयौं मधेशी दलको रूप धारण गरेको मधेशी दलहरूले एकपटक फेरी नयाू नौटकींको सुरूवात गरेका छन् । त्यसो त बेला–बेलामा टुट–फुटका कारण चर्चामा आउने तराई–मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको पछिल्लो समय एकीकरण्ँको प्रयासबारे चौतर्फी चर्चाले अवश्य पनि सवैलाई तानेको छ । यद्यपि मधेशी राजनीतिबारे थौरै पनि ज्ञान वा जानकारी भएकाको टिप्पणीलाई मध्यनजर गर्ने हो भने यो चर्चा एउटा सुनयोचित खेल मात्र हो जुन खेलमा सत्तामोह अनि सत्ता प्राप्तिको चालबाजी लुकेको छ ।
यहाँ सामान्य तवरले एउटा प्रश्न उब्जिन्छ – त्यसो हो भने एकातर्फ एकीकरणको हल्ला फिजाउने अनि अर्को तर्फ आ–आफ्ना पार्टीहरूका कार्य समितिहरूलाई धमाधम विस्तार गर्दै हिंड्ने । यो कस्तो पारा हो ? अनि एमाले कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका उपेन्द्र यादव अनि कांग्रेस डेमोक्रेटी पृष्ठभूमिका महन्थ ठाकुरबीच कुनै पनि अवस्थामा एकीकरण हुनु सम्भव छ ? यदि छ भने तर्क के ? के तमलोपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला ले नेपाली पत्रकारहरूलाई मुर्ख बनाउँदै भन्दैमा दुई पार्टी एकिकरण हुन सक्छ ? अवश्य पनि सक्दैन ।
के तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालबीच कुनै पनि हालतमा एकीकरण हुन सकिएला ? हल्ला फिजाउने तमलोपाधारी पूर्वदरवरिया नेता शुक्लासँग न त यसको कुनै तर्क पाइन्छ न त कुनै जवाफ नै । तर उता एक औपचारिक कार्यक्रममा उपेन्द्र यादवले सिधै भनेका छन् की सवैभन्दा पहिला मधेशवादी अनि मधेशकेन्द्रित को हो त्यसको खोजी हुनु पर्दछ र यहि अवस्थामा फोरम नेपाल ठाकुर जस्ता धृष्ठराष्ट्र नीति भएकाहरूसँग कुनै तवरले पनि एकीकरण गर्न सकिन्न । यो हल्लाबाजी एउटा षड्यन्त्र मात्र हो ।
पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेका केही समाचारहरूलाई आधार मान्ने हो भने एकीकणको प्रक्रिया समेत सुरू भइसकेको छ आरे र चाँडै नै एकीकरण हुने दाबी गरिरहेका छन् । तर फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पछिल्लो बयानलाई मध्यनजर गर्ने हो भने एकीकरण कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन । तर यता तमलोपाका प्रवक्ता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले हालसम्मको एकीकरणको प्रयास उत्साहजनक भएको भनी दिनहुँ दावी गर्दे आएका छन् । तमलोपाले त झन् फोरम नेपालसंगको एकीकरण प्रक्रियाका लागि शुक्लाको नेतृत्वमा पाूच सदस्यीय वार्ता टोली समेत बनाएको बताउँदै आएका छन् । तर यादवको ठिक उल्टो जवाफ छ । उनी भन्छन्, फोरम नेपाललाई कुनै जानकारी छैन । त्यसो त तमलोपाले अन्य मधेशी दलसंग एकीकरण्ँका लागि उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली बनाएको छ । त्रिपाठीले थुप्रै मधेशी दलसंग अनौपचारिक वार्ता समेत गरिसकिएको बताउँदै आएका छन् । त्रिपाठीकै दावीलाई पनि आधार मान्न सकिने कुनै तथ्य देखिदैन । केही दिनअघि एक दैनिकले त्रिपाठीले फोरम लोकतान्त्रिकसँग तमलोपा कार्यालयमै औपचारिक वार्ता सुरू गरेको समाचार छापेको थियो । जबकी अहिलेसम्म पनि यसबारे फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारको कुनै भनाई आएको छैन । तसर्थ यसलाई मधेशी दलको मिडिया नौटंकी भन्दा कुनै अनुचित न होला ।
त्यसो त मधेशी दलहरूबीचको एकीकरण मधेशी जनताका लागि खुसीको कुरा हो तर सत्तालिप्सा अनि नेतृत्व घमण्डमा चुर अहिलेका मधेशी दलका नेतृत्वकै अगुवाईमा मधेशी दलहरू एकीकरण होला भनी कुनै पनि आधार अनुरूप भन्न सकिन्न । सत्तालिप्सामा व्यस्त मधेशी प्रमुख नेताहरूकै नेतृत्वमा मधेशी पनि अधिकार सम्पन्न होला भन्ने पनि कुनै आधार छैन तर विडम्बना मधेशको की मधेशहितले उत्प्रेरित मधेशी कुनै नेताको उदय भएको छैन । युवा पुस्ताबाट पनि आउँदै आएनन् वा आइरहेकै छैन भन्ने पनि होइन ।
तर उनीहरूको पनि उही पारा छ जुन मधेशी नेता आए पनि पहिला गोजी नै भर्ने । यता निर्वाचनको सम्भावना बढ्दै गए पछि मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरू एक पछि अर्को गर्दै माओवादी इतर वा माओबादी निकट ध्रुवीकरण्ँमा सक्रिय भएको विशलेषणहरू पनि भइरहेको छ । तर यो एकीकरणको ककस कहिलेसम्म रहने हो भन्ने भन्न सकिने अवस्था छैन ।
सविधानसभाको निर्वाचन अगाडी मधेशी जनताले नयाँ नेपालको सपना देखेका थिए । नेपाल अबको मधेश यस्तो होला ‘नेपालमा अवको मधेश त्यस्तो होला’ भन्ने बहस हरेक मधेशी जनताको मन–मनमा नै भईरहेको अवस्था थियो । तर अब भने मधेशी जनताको चाहना फेरिएको छ । जनता मधेश केन्द्रित राजनीतिक शब्दबाटै त्रसित भईरहेका छन् । मधेशी राजनीतिक दलहरूको नाम त झन् मधेशी जनताले सुन्न पनि चाहन्न ।
देशमा यतिबेला संसद छैन, स्थाई सरकार छैन, भएको सरकारलाई कोहीले वैधानिक त कोहीले अवैधानिक भन्दा जनतामा थप अन्योलता बढिरहेको छ । मुलतः कानुनी राज्यको अवधारणा, मानव अधिकारको रक्षा, नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूती, समतामुलक समाज, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक विकास प्रशासन, शोषण र भ्रष्टाचार मुक्त राज्य, सबै जात–जाति आदि वर्गको समावेशी पहुँचको अधिकार, उच्च आर्थिक समृद्धि, गरिबी निवारण जस्ता ः शुसासन प्राप्तिका लागि जनता आसावित थिए । राजनीतिक सहमति बिना संविधान निर्माण पनि असम्भव नै छ र भयो पनि । त्यसो त नयाँ संविधान निर्माणको प्रमुख समस्या नै कुनै न कुनै रूपबाट संघीयता नै बन्न गयो । जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिको उपलब्धी स्वरूप अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधनद्वारा संघीय राज्य निर्माण गर्ने सर्वसहमति भएको थियो ।
अन्तिम दिन अन्तिम घडीमा पनि संघीयता, राज्य पुनः संरचना र शासकीय स्वरूप थाती राखेर सहमति भएका र सहमति हुन बाँकी विषयहरू सूचीकृत गरी संविधान घोषणा गर्ने प्रमुख तीन दलबीच निर्णय असहमति भएको थियो । तर जनताले नया संविधान पाउन सकेनन् । वर्तमान सरकारको वैधानिकता प्रश्न र अगामी दिनमा पुनः नयाँ निर्वाचन घोषणाको औचित्य आदि माथिको वाद–विवादमा नै यतिबेला देशको बढी समय खर्च भईरहे छ । यस अवस्थामा नेपाली जनता र राष्ट्र दुबैको हितमा सहमति नै एक उत्तम विकल्प हो । अन्यथा राज्य झन् संकट दिशातिर धकेलिने छ र साथ साथै दुर्घटनाग्रस्त हुन पनि छैनन् भन्ने पनि कुनै ठोस आधार छैन ।
मधेशी जनतालाई निकै नै ठूला–ठूला सपना देखाएर संविधानसभा हुँदै सत्तासम्म आइपुग्दासम्म मधेशी जनतालाई मधेशी दलहरूले कुनै ठोस र दिगो उपलब्धी दिन सकेका छैनन् । मधेशी दलकै गृह मन्त्रालय त छन् तर उक्त मन्त्रालयमा मन्त्रीको भने केही चल्दैन । उदाहरणका लागि प्रहरी प्रमुखको नियूक्ति अनि नियूक्ती पछि एसपी डिएसपीहरूको सरूवा पक्रिया हेर्दा हुन्छ । जहाँ गृह मन्त्रीको केही चलेनन् यस्ता कयौं उदाहरणहरू छन् जसले स्पष्ट पार्छ कि मधेशी दल सरकारमा त छन् तर सत्तामा भने छैन । त्यसैले सत्ता होइन प्रभु सत्ता माग्नेहरू अनि अफ्नै शासन अफ्नै प्रशासन नारा लगाउनेहरूले एक पटक आफ्नै अनुहार हेर्दा हुन्छ अनि मात्र मधेशको ठेकेदार बन्ने प्रयासमा जुट्दा उचित होला की ?
२८ कार्तिक २०६९, मंगलवार १६:५८ मा प्रकाशित